> Resource > Video > Sida loo dar SRT in DVD
Files SRT waa files Cinwaan videos ', kaydinta videos wadahadal iyo qaab faallo oo ay ku jiraan filimada iyo bandhigyada television. SRT files Cinwaan yihiin si waxtar leh in ay la badanaa gundhig karaa videos si ay uga caawiyaan daawadayaasha fahmi videos ka fiican. Oo weliba, SRT gubanaya si DVD waa baahida weyn ee suuqa ee hadda jira.
In badan oo xaaladood, dadka ka heli kartaa qaar ka mid ah filimada laga cabsado shisheeye aan subtitles ah. Wakhtigan, waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in ay ku daraan subtitles luqad u gaar ah oo ayan u hurin si DVD u arkaysid ee telefishanka weyn-screen ay iwm Waxaa dhab ahaan fikrad weyn si kor loogu qaado waayo-aragnimo la daawado, laakiin helitaanka file SRT ah in DVD ah sidoo kale waa mid ay adag tahay.
Waxaad tahay nasiib halkan haddii aad rabto in lagu daro SRT in DVD. In this article, waxaan inta badan ku tusaan sida loo dar files SRT in videos in ku dhawaad ​​qaab iyo badalo si DVD. Waxaad ku dhan samayn karaa hal app la qasabno yar oo sahlan.
1. Videos files in aad rabto in aad ku darto SRT iyo gubi in DVD. (Tusaale ahaan: AVI, MP4, MKV iwm)
2. SRT Cinwaan gudbiyo waxaad kala soo bixi internet-ka
3. Qalab kaa caawinaya in aad ku darto SRT in DVD - Video Converter
Download iyo rakibi SRT xirfadeed si DVD Converter, ka dibna raac tallaabo hage talaabo ah. Fiiro gaar ah hagahan waa ku saleysan Windows OS. Dadka isticmaala Mac, ayaa kuu gudbin kara Guide Mac Users ' .
1 Import video files in aad rabto in aad ku darto subtitles SRT
First, aan bilowno app ka dib markii la rakibey. Markaas, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan video ah in aad rabto in aad ku darto subtitles SRT iyo gubi in DVD. Just u tag "Guba" tab> "Add Faylal ay" ka menu ugu weyn ee ay caleenta your computer iyo dajiyaan doonayo aad video files. Haddii kale, si toos ah jiidi files bartilmaameedka barnaamijka.
2 dar SRT in DVD
Riix ah "Edit" button on video kasta bar in la furo dariishadaha ay tafatirka, halkaas oo aad u baahan tahay inaad ku dhufatey "Cinwaan" tab. Hadda, aad ku soo gashay si ay interface Cinwaan-tafatirka. Just la furo dariishadaha Falanqeynta hoos-hoos si ay u dajiyaan Cinwaan faylasha SRT aad rabto in aad ka your computer. Marka la soo dhaafay, ka dhacay "OK" si ay u xaqiijin.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta DVD gubashada, inaad si fiican u lahaa inaan ku eegaan saamaynta ugu horeysay. Saxaafadda "Play" button in carmal kulanka xiisaha leh ee dhinaca midigta ee interface ka.
3 Dooro DVD menu oo ayan u hurin si DVD
Riix ah "Change Template" button ka dibna waxa aad fursad u haysataa in ay doortaan aad DVD menu jecel, music dhigay asalka iyo dar jeeda sawir iwm dhuftay "dheeraad ah" ee salka "Change Template" Murayaad inay sameeyaan qaar ka mid ah goobaha optional sida "NTSC "ama" Pal "iwm Markii wax walba la sameeyo, riix" Guba "si ay u gubaan SRT in DVD.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta in, waxaad u baahan tahay in aad is geliso DVD5 maran ama disc DVD9 hore.
Sida loo dar SRT Cinwaan Faylal ay si AVI ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo dar subtitles in MP4 Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Top 10 ka dib Dhibaatooyinka tuuryo ku Video Faalladaada
Sida loo Download Daily Show Videos in Click ah
Sida loo Beddelaan VOB in MKV ee Mac iyo Win (Windows 8 ka mid ah)